Fampianarana gemology - Mazava ho azy momba ny Gemology - Fanavaozana vaovao misy 2021
NEW : Mianara gemology an-tserasera
Noho ny fangatahana goavana ataon'ireo mpianatsika izay tsy afaka mandeha nanomboka ny volana martsa 2020, dia azo atao izao ny mianatra amin'ny Internet.
Mampiasa rindrambaiko samihafa izahay amin'ny fampianarana amin'ny rafitra fakan-tsary marobe: Zoom, Skype, WeChat, WhatsApp… Afaka mampiasa rindrambaiko hafa mifanaraka amin'ny safidinao izahay.
Inona ny gemology?
Mampianatra gemology amin'ny teny anglisy na frantsay izahay
Alahady (ora 3)
Andro feno (2 x 3h = ora 6)
Mazava ho azy momba ny Gemology
Synthetic & fitsaboana
Ny vidiny sy ny naoty
Ny Gemology dia ny siansa amin'ny akora vatosoa, ary sampana manokana an'ny sampana mineralogia siantifika taloha. Ny gemology fandalinana dia mandrakotra ny lafiny teknika rehetra amin'ny vatosoa sy akora gem.
Ny fananana simika, ara-batana ary optique, ny teknika ampiasaina amin'ny famokarana sarin-javatra gemetika sy synthetika, ny fanapahana sy ny fandefasana vatosoa, ary ny tena zava-dehibe dia ny fomba fampianarana sy ny zavamaniry vita amin'ny famaritana, ny fanoratana ary ny fanombanana ireo vatosoa.
Ny teny hoe 'fitaovana vatosoa' dia mandrakotra karazan-javatra marobe. Ny ankamaroan'ny akora vatosoa dia mineraly, saingy amin'ny 3000 eo ho eo, mineraly fantatry ny olombelona, ​​dia fianakaviana 70/500 eo ho eo ihany no heverina fa manana ny toetra naterak'io sokajy manokana antsoina hoe vatosoa io.
1 olona: 200 $
2 hatramin'ny olona 4: 120 $ / pro person
Olona 5 +: 100 $ / olona
1 olona: 400 $
2 hatramin'ny olona 4: 240 $ / pro person
Olona 5 +: 200 $ / olona
* Ny vidin'ny vidiny dia tsy misy afa-tsy ny isan'ny olona avy amin'ny famandrihana anao manokana * Famandrihana farafahakeliny 2 herinandro mialoha Please Mifandraisa aminay ho an'ny famandrihana.
Ahoana no tsy hidona amin'ny fandriky ny mpivarotra vatosoa sandoka? Ahoana ny fomba hamantarana ny vatosoa voajanahary, synthetika, fitsaboana? Ahoana ny fomba hanombanana ny kalitao sy ny vidiny? Hahazo valiny amin'ireo fanontanianao rehetra ianao mandritra ity kilasy ity
Ny fandaharam-pianarana dia ahitana:
zava-nitranga optical gemstones
Famenoana fitaratra / Famenoana fracture / Fanasitranana Flux
Ny lanjan'ny karate
Avelao ny iray kilasy hahatakatra bebe kokoa ny toerana niavian'ny vatosoa ary ny fomba hahitana am-pahombiazana ny endriny isan-karazany.
PROFESSOR Dr. MOHAMED MOHAMED TOLBA SAID dia nahavita ny fiofanana momba ny firavaka. 1 andro (6 ora) "Tamin'ny 15 aprily 2015 dia nandany andro iray tena mahaliana sy manaitaitra aho tamin'ny fianarako fampianarana Mazava ho azy fa Gemological Institute ao Kambodza, Andriamatoa Jean-Philippe no mpampianatra ahy nandritra ny 6 ora nianarana, matihanina amin'ny firavaka izy. Heveriko fa ny Gemological Institute any Kambodza no toerana mety hahazoana fahalalana bebe kokoa momba ny gemology sy vatosoa. ”
Andriamatoa SERGIO (avy any Italia) sy Ramatoa WIRIYA (avy any Thailand) dia nahavita ny fiofanana momba ny firavaka. Antsasaky ny andro (3 ora) “Philippe il proprietario è una persona molto compente e professionale nel campo della gemmologia, noi abbiamo fatto un corso di mezza giornata in cui ci ha introdotto nel mondo delle gemme.ha una showroom notevole di gemme autentiche cambogiane e non… insomma se volete comprare rubini e zaffiri veri birmani recatevi da Philippe è il n ° 1 a Siem hijinja. Inoltre se volte ”- 5 Mey 2015
Andriamatoa CARL (avy any Angletera) sy Ramatoa AGYNESS (avy any Shina) dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. 1 andro (6 ora) 30 Jolay 2015
Andriamatoa Toh Hock An (avy any Taiwan) dia nahavita ny fampianarana momba ny gemology. Antsasaky ny andro (3 ora) 15 Aogositra 2015
Master Hanz Cua (avy any Filipina) dia nahavita ny fiofanana momba ny firavaka. Antsasaky ny andro (3 ora) 15 Oktobra 2015
Ramatoa Ramya Ponnada sy Andriamatoa Krishna Kanth Ponnada (avy any India) dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Antsasaky ny andro (3 ora) 12 Novambra 2015
Andriamatoa Sonny Rodriguez sy Ramatoa Tiffany Rodriguez (avy any Filipina) dia nahavita ny fampianarana momba ny firavaka. Antsasaky ny andro (3 ora)"Raha mila vato vatosoa azo antoka ianao dia mandehana eto" - nitady valiny momba ny vatosoa amidy eny amin'ny tsena taloha aho ary ity toerana ity dia nanome ahy ny fampahalalana rehetra ilaiko hahalala indrindra ny maha-azo antoka ireo vatosoa. Toa ny ankamaroan'ny fivarotana vatosoa eny an-tsena no hivarotra anao sandoka.
Nisoratra anarana tamina atrikasa 3ora aho ary tena manitatra ny fahalalako momba vatosoa. Nomena taratasy fanamarinana aho taorian'izay ary tena mendrika izany 3hours. Tena tia vatosoa Andriamatoa Jean. Zahao ny tranokalan'izy ireo, mifandraisa amin'izy ireo ary izy ireo dia haka anao tuk-tuk anao any amin'ny hotely misy anao. Na ahoana na ahoana, dia tsy liana amin'ny fandalinana vatosoa ianao fa mitsidiha fotsiny dia jereo ireo vatosoa mora azony amidy - 12 Novambra 2015
Andriamatoa Thorstein sy Andriamatoa Widar (avy any Norvezy) dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Antsasaky ny andro (3 ora) 16 Novambra 2015
Tom sy Kristin (avy any Etazonia) & Norma sy Trevor (avy any Kanada) dia nahavita ny fiofanana momba ny firavaka. Novambra 22, 2015
Konstantin sy Silviya (avy any Bulgaria). Novambra 28, 2015
Miles, Jolay, Rosie, Tilly & Celeste (avy any Angletera). Desambra 22, 2015
Ramatoa Lee Hui Yun (avy any Singapour). Desambra 23, 2015
Annick & Maxim (avy any Aostralia). Desambra 28, 2015
Jasmine, Bruce & Allan (avy any Philippines). Desambra 29, 2015
Ann & Mary Janoary 8, 2016
Marc & Lani, Avy any Los Angeles, Kalifornia, Etazonia Janoary 10, 2016
Vehivavy Ruth, avy any Indonezia Janoary 12, 2016
Atoa Jeff, avy any USA Janoary 13, 2016
Joshua & Michael, avy any Etazonia Janoary 20, 2016
Stephanie & Mason, avy any Hong Kong Janoary 21, 2016
Gary, Diane & Barb, avy any Etazonia Janoary 21, 2016
Anna & Diana, avy any Russia Febroary 4, 2016
Sok heng, Pui San, Chiew Sum & Sing Kwan, avy any Malezia "Fitsidihana mahatsiravina - mahaliana sy fisokafan'ny maso" - Toerana tsara hitsidihana! Noraisinay ilay lesona adiny 1, izay lasa somary lava kokoa noho ny fahalalana be dia be izay nozarain'i Jean. Nahafinaritra i Jean fa tsy nanazava ireo karazana vato isan-karazany fotsiny, fa nahafinaritra azy ihany koa ny nanangana azy tamin'ny fiainana cambodianina ary koa tamin'ny tantara mahafinaritra be. Fihetsiketsehana tena lehibe koa ao amin'ny laboratoara izay ahitanao karazana vatosoa samihafa ary ezaho fantarina hoe iza no tena izy, voatsabo na sentetika! Misy ihany koa ny vatosoa vatosoa cambodian eo an-toerana hividy amin'ny vidiny mirary aorian'ny lesona. Nianatra zavatra betsaka, nahafinaritra be dia be ary namela vatosoa kambodiana tsara sy fankasitrahana vaovao hita ho an'ny vatosoa! - 5 Febroary 2016
Nikolas, Christodoulos & Despoina, avy any Gresy Febroary 7, 2016
Mpiasa Katherine, avy any Espaina, no nanatontosa ny fanofanana momba ny famolavolana. Febroary 10, 2016
Naho, avy any Japon & William, avy any UK, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Febroary 15, 2016
Philip, avy any Angletera, no nanatontosa ny fanofanana momba ny fitoviana. Febroary 19, 2016
Knud-Erik, Dorte & Dorthe, avy any Danemarka, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Febroary 20, 2016
Ramatoa Jerica, avy any Etazonia, dia nanatontosa ny fiofanana momba ny fitoviana. March 4, 2016
Mpiasa Lena, avy any Okraina, dia nanatontosa ny fanofanana momba ny famolavolana. Nitsidika ny institiota aho hahafantatra bebe kokoa momba ny vato Kambodziana. Tokony holazaiko fa ity toerana ity dia vita tsara ho an'ny rehetra - mpitsidika, mpitari-tolona, ​​matihanina, mpividy. Eto ianao dia afaka mahita sy 'miaina' ny vato rehetra eran'izao tontolo izao. Mazava ny vaovao, mahafinaritra ny atmosfera. Tiako ny misaotra an'i Philippe tamin'ny lesona tsara - 14 martsa 2016
Javier & Andrea, avy any Angletera, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. March 24, 2016
Tanya, Sebastian & Scott, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Nentinay nandritra ny adiny iray ny zanakay lahy 8 taona satria tena liana tamin'ny vatosoa, vato ary kristaly izy. Jeanne-Pierre dia nandany mihoatra ny ora natokana ary nahalala be sy nafana fo tamin'ny resaka gemmology. Ny zanakay lahy dia nankafy fatratra ilay fampianarana, toa anay koa, indrindra ny fotoana tao amin'ny laboratoara, namantatra ireo vatosoa samihafa tao ambanin'ny mikraoskaopy. Faly izy fa lasa niaraka tamin'ny taratasy fanamarinana ary koa vato Praseolite. Misaotra anao. - 29 martsa 2016
Sangita & Daniel, avy any Angletera, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao Aprily 3, 2016
Hilary & Ian, avy any Aostralia, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Aprily 4, 2016
Maria & Joanna, avy any Filipina, dia nahavita ny fampianarana gemology momba ny gemology. Nandray ny fampianarana antsasaky ny andro tao amin'ny institiota gemological. Tena nahalalana zavatra! Aorian'ity fampianarana ity dia azo antoka fa matoky 100% bebe kokoa isika amin'ny fanombanana ny vatosoa. - 8 aprily 2016
O'Malley Family, avy any Etazonia, taorian'ny fiofanana momba ny Gemology. Aprily 14, 2016
Silvester & Silvia, avy any Aostralia, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Enga anie 12, 2016
Ramatoa Akemi, avy any Japon, no nanatontosa ny fanofanana momba ny fitoviana. Enga anie 15, 2016
Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric, avy any Filipina, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Enga anie 29, 2016
Ma. Luz, avy any Philippines, & Gordon, avy any UK, dia nahavita ny fampianarana gemology momba ny gemology. Enga anie 31, 2016
Katie, Edwardo, Jennifer, & Jeffrey, avy any Etazonia, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Jona 16, 2016
Jamie & Ellie, avy any Etazonia, dia nahavita ny fampianarana momba ny gemology. Jolay 18, 2016
Pauline & Ronan, avy any Frantsa, dia nahavita ny fampianarana momba ny gemology. Aogositra 1, 2016
Sue, Maureen & Bruce, avy any Etazonia, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Aogositra 11, 2016
Anne & Olivier, avy any Frantsa, dia nahavita ny fampianarana gemology momba ny gemology. Aogositra 18, 2016
Max & Hester, avy any Etazonia, dia nahavita ny fampianarana momba ny gemology. Aogositra 19, 2016
Carrie & Martijn, avy any Aostralia, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Aogositra 20, 2016
Katherine, avy any Aostralia, no nanatontosa ny fanofanana momba ny famolavolana. 8 septambra 2016
Allesha & Ross, avy any Etazonia, dia nahavita ny fampianarana gemology momba ny gemology. 10 septambra 2016
Mr.Thiery, avy any Frantsa, no nanatontosa ny fampiofanana herinandro iray (ora 30) amin'ny famolavolana. 26-30 septambra 2016
Ali & Joe, nahavita ny fiofanana momba ny firavaka. Oktobra 20, 2016
Lenny, mpianatra faralahinay, avy any Frantsa, no nanatontosa ny fanofanana momba ny fitoviana. Oktobra 21, 2016
Steven & Jene, avy any Etazonia, dia nahavita ny fiofanana momba ny haitao. Desambra 5, 2016
Fiona & Shah, avy any Angletera, dia nahavita ny fampianarana gemology momba ny gemology. Desambra 9, 2016
Aislinn & Dominique, avy any Hong Kong.Desambra 12, 2016
Please Mifandraisa aminay ho an'ny famandrihana.